China 1050 Aluminium Pipe YeMotokari fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Aluminium pombi imhando yepombi isiri-ferrous simbi yepombi, iyo inogadzirwa nearuminiyamu yakachena kana aruminiyamu alloy uye yakadhindwa mugomba simbi tubular zvinhu nekureba kwayo.
Zvinoenderana neiyo extrusion nzira, yakakamurwa kuita isina musono aluminium pombi uye yakajairwa extruded pombi
Zvinoenderana nemazvo: akajairwa machubhu ealuminium uye machubhu ealuminium chaiwo, pakati peayo machubhu ealuminium chaiwo anowanzoda kudzokororwa mushure meextrusion, senge kutonhora kudhirowa, kudhirowa kwakanaka uye kukunguruka.
Yakakamurwa nehupamhi: yakajairika aluminium pombi uye yakatetepa-yakavakirwa aluminium pombi
1) Giredhi:1000, 3000, 5000, 6000, 8000 series
3) Surface kurapwa: Poda coating, Color Anodizing, Jecha Blasting, Brushing, CMP
4) Type: kutenderera, sikweya, rectangular kana customized
5) Rudzi: Chimiro, sirivha, ndarira, champagne, dema, gloden, nezvimwe.
6) Kukura: 1.Round tube dhayamita: 9.5-250 mm (yakagadzirirwa)
7)Rusvingo Hukobvu:0.5-20 mm (customized)
8) Kureba: yakagadzirirwa
9) Kugadziridza Service: punch
Chekutanga, zvakanakira welding tekinoroji: iyo welding tekinoroji yehutete-walled yemhangura-aluminium pombi, iyo yakakodzera kugadzirwa kwemaindasitiri, inonzi dambudziko repasi rose, uye ndiyo tekinoroji yakakosha yekutsiva mhangura nealuminium yekubatanidza pombi yemhepo. conditioner.
Chechipiri, kubatsirwa kwehupenyu hwebasa: kubva pakuona kwemukati rusvingo rwealuminium pombi, nokuti refrigerant haina mvura, rusvingo rwomukati rwemhangura-aluminium yekubatanidza pombi haigoni kuora.
Chechitatu, simba rekuchengetedza simba: kudzikisa kupisa kwekupisa kwepombi yekubatanidza pakati peimba yemukati uye yekunze unit yeair conditioner, iyo inowedzera-kuchengetedza simba, kana zviri nani kupisa kwekushisa, kuwedzera simba- kuzviponesa.
Chechina, ine yakanakisa kubhenda kuita uye iri nyore kuisa nekufamba
Aluminium mapaipi anoshandiswa zvakanyanya mukufamba kwese kwehupenyu, senge mota, ngarava, aerospace, avhiyesheni, midziyo yemagetsi, zvekurima, electromechanical, mhuri, etc. Aluminium pombi dziri kwose kwose muupenyu hwedu.